डा. युवराज संग्रौलालाई खुलापत्र : देशबिरुद्धको यस्ता दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध किन बोल्नुहुन्न ? « Janata Times
तपाईं जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिले पेसेवर वकिल नभई बहस गर्दा त प्रधानमन्त्री र उहाँका विरोधी दुवै पक्षका कमजोरी औँल्याउनु पर्ने होइन र ? तपाईंले मान्छे मारेको र मरेको मात्रै देख्नुभएछ तर बलात्कार गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दा मारेको तपाईं जत्तिको अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताले किन देख्नुभएन ? के कारणले देख्नुभएन ? कारण नभई कार्य हुँदैन । तपाईंले घर भत्केको देख्नुभयो तर भत्काउने धुन्धुकारीलाई देखीदेखी नदेखेको बहाना गर्दै हुनुहन्छ । उसलाई बहस गरेर बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ
प्रसिद्ध संविधानविद र विश्लेषक कहलिएका प्राडा. युवराज संग्रौलाले २०७४ साल पुस १८ गते अन्नपूर्ण दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा सिक्किमले गणतन्त्र जोगायो तर देश जोगाउन सकेन भन्नुभएको थियो । उहाँले विगतमा नेपाल बाह्य दवाव र प्रभावमा परेर जुनसुकै बखत विघटन र विखण्डन उन्मुख हुनलागेको विषय बारबार उजागर गरेका विचारहरु बारे यो लेखक भलिभाँती जानकार छ । तर संग्रौलाको हालै इमेज च्यानलमा दिएको परस्पर विवादित र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सुन्दा यो लेखक अचम्मित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेको विषयलाई नानी जन्माउन नसकेकी गर्भवती पत्नीलाई मारेको विषयसित उहाँले जोड्नु भएको रहेछ । तर युवराज संग्रौलाले नेपाल आमा नै मर्न लागेको किन ? के कारणले देख्नुभएन ? यो भने निकै रहस्यमय देखिन्छ । संविधान त फेरि लेख्न सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ तर देश गुमेपछि फेरि कलमका मात्र भरमा पुनः प्राप्त गर्न सकिन्न ।
संग्रौलका भनाइअनुसार आफू जत्तिको मान्छेलाई संविधान विघटन कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ । यसमा कुनै आपत्ति गर्न मिल्दैन । उहाँ भन्दा उपल्ला तहका न्यायमूर्ति तथा पूर्वप्रधानन्याधीशले पदीय मर्यादाविपरीत कानूनकै धज्जी उडाएर सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न सुहाउँछ र मिल्छ भने जस्ले बढी पैसा दिन्छ, उसैको पक्षमा बहश गर्ने पेसेवर वकिललाई नमिल्ने कुरै छैन । अझ कतिपय न्यायमूर्तिहरु नै आफू अनुकूलका कथित विवादास्पद मुद्दामा नै जिन्दावाद र मुर्दावाद भन्दै खुल्ला सडकमा पदार्पण गरेको भद्दा दृश्य देख्नु परेकै छ ।
संग्रौला आफ्नो निर्भिक लेखकीय भूमिका कारण जुनसुकै बेला मारिन सक्ने स्वउद्घोष गर्नु हुन्छ भने यस देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्ड अस्तित्व रक्षाका लागि बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारी भन्दा पनि खुल्ला र दृढ अडान राख्ने देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कति खतरा होला ? नेका युवा नेताहरु चन्द्र भण्डारी र एनपी साउदसँगको एक संक्षिप्त संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष गरेर बाह्य शक्तिको अत्यन्त खतरनाक खेलको सुविचारित सम्भावनाको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर तपाईहरु त भण्डारी र साउदजस्तै स्वतःस्फूर्त रुपमा देशको चिन्ता गरेर भेट्न र सरसहयोग गर्न जानु भन्दा मानमात्रै खोजेर बसेको त देखियो नि । यत्तिका प्रबुद्ध व्यक्तित्वलाई कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न कसैले सिकाउनु पर्ने भन्दा आफैँले महसुष गर्ने होला नि ? देशलाई संकट परेका बेला त्यसको साथी र सारथी बन्न सकिन्न त्यस्तो कानुन्ची पण्डितको माने र महत्व के कति होला र ? देश विघटनउन्मुख हुनलागेको बेला कोठामा घोत्लिएर पेशागत विषयका लेख मात्रै लेखेर बसेँ भन्दा भावी पुस्ताले के भन्ला ?
। तपाईंका भनाइअनुसार इतिहास बदल्न सक्तैन होइन, कालो र भ्रमित इतिहास सच्याउनु पर्छ र सकिन्छ । इतिहास त रचना गर्न सकिन्छ, पुनर्लेखन पनि गर्न सकिन्छ । एक सत्यले हजार झुटलाई सत्यानाश पारिदिन्छ । महामना मोदनाथ प्रश्रित एक्लैले नेपाल नेपाली हुनुमा सर्वाधिक गर्व गर्नुपर्ने नेपाल एकीकरण र यसका मूल अभियन्ताको गरिमा बचाउनु भएको हो । यस विषयमा सुरुमा उहाँ एक्लै भए पनि उहाँका पछि देश र देशवासी लागे । मनोगत भँडास व्यक्त गर्न र केही दिनको खपतका लागि लेख्ने बोल्ने कि ? देश र दुनियाँको हितका लागि खप्ने र टिक्ने कर्म गर्ने भन्ने सबाल महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईंले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी र जनप्रतिनिधिलाई होल्डिङ गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ भन्ने उपदेश गरेको सुनियो । हो, होल्डिङ क्षमता भएकैले यति अवधिसम्म समस्या बल्झिन नसकेको हो । तर तपाईंकै कुरा छरछिमेकीको उचालमा परेका तपाइँका सबै सन्तानले मान्लान ? मानेका छन र ? त्यसमा पनि यो त राजनीति हो । भावी राजा बन्ने दौडमा लागेका युवराजले र युवराजधिराजले आफ्नै बाबु र दाजु मारेको देख्नुभएको छैन ? त्यो पनि नेपाल जस्तो सामरिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुकमा ।
जननायक तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई भारतीय शासकले हामीले भने अनुसार माने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बनाइदिने लोभ देखाएका थिए तर कोइराला त्यस्ता तुच्छ लोभमा नपरेर नेपाल ससिक्कीमीकरण हुनबाट जोगिएको तपाईंलाई थाहै छ । नेपाल एकीकरण कालदेखि हालसम्म बारबार भएका अनेक खालका षडयन्त्र र प्रलोभनमा नपरेको हुँदा देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता सुरक्षित हुन सकेको हो । विगतदेखि अनेक खालका नितान्त निजी स्वार्थका लागि देशलाई दाउमा राखी विखण्डन गर्न उद्यत नेताहरु अहिले पनि देखिन्छन । यस्ता दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध एक अक्षर लेख्नु र बोल्नु हुन्न किन ?
संग्रौलाजी तपाईं भुइँको टिप्न गोजीको खसाउने जस्तो खालको कुरा गर्दै हुनुहन्छ । विगत र वर्तमानका योग्य, सक्षम र प्रभावशाली नेतालाई खुइल्याएर भोलि योग्य नेता जन्मिने आशा गर्दै हुनुहन्छ । मदन भण्डारीलाई बाचुन्जेल एकरत्ति सकार नदेख्ने अहिले नै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका सकार उल्लेख नगर्ने हतोत्साहित गर्ने अनि फेरि भोलिकै मात्र आश गर्ने हो त्यस्तो भोलि कहिले आउला महाशय ? वर्तमानको भ्रूणहत्या गरेर भविष्य जन्मिदैन वकिल साहेव ।
तपाईं जस्ता प्रबुद्ध व्यक्तिले पेसेवर वकिल नभई बहस गर्दा त प्रधानमन्त्री र उहाँका विरोधी दुवै पक्षका कमजोरी औँल्याउनु पर्ने होइन र ? तपाईंले मान्छे मारेको र मरेको मात्रै देख्नुभएछ तर बलात्कार गर्ने दुष्प्रयत्न गर्दा मारेको तपाईं जत्तिको अन्तराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाताले किन देख्नुभएन ? के कारणले देख्नुभएन ? कारण नभई कार्य हुँदैन । तपाईंले घर भत्केको देख्नुभयो तर भत्काउने धुन्धुकारीलाई देखीदेखी नदेखेको बहाना गर्दै हुनुहन्छ । उसलाई बहस गरेर बचाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।
तपाईंले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको मतको सामना गरेर असफल हुँदा संसद् विघटन गर्न सुहाउँथ्यो भन्नुभएछ तर यसो गरेको भए तपाईं नै फेरि त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर अर्को सरकार बन्ने बाटो खोल्नु पथ्र्याे भन्नुहुन्थ्यो । किनकि न्यायका नौसिङ हुन्छन भन्ने संविधान र कानुनी कखरा जान्नेलाई पनि थाहा छ । बहुमत प्राप्त दल विभाजित नभएका अवस्थामा कसको र कुन दलको बहुमत हुन्थ्यो र ठूलावडा भनिनेहरुले बोलेका र लेखेका भ्रमित कुरा सत्य हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन खोजेको अर्थ, अन्तर्य चाहिँ किन देख्नुभएन । यस विषयमा प्रश्न गर्दा तपाईं यो त काल्पनिक कुरा हो भन्नुहुन्छ । कतिपय मुद्दामा मनसायसम्म देख्ने विद्वान् वकिलले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको अन्तर्य देख्न सक्नुपर्छ र मात्र ऊ सामान्य मानिसभन्दा माथि हुन्छ । राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर उपराष्ट्रपतिलाई कार्यबाहक राष्ट्रपति बनाएर नेपाली सेनामाथि आफ्नो छापामार शैलीको कमाण्ड थोपर्ने विषय खुल्ला किताव सरह छ । बेसार भनेर चिनेपछि बारबार कोट्याइ रहनुपर्छ र लयरसाव ?
यत्ति सामान्य र सरल कुरा किन बुझ्नसक्नु भएन ? थोरैले धेरैलाई प्रभावित गर्ने सामथ्र्यका तपाईं मिडियामा बारबार छाइरहने विश्लेषकहरु किन भ्रमहरु मात्र प्रवाह गरिरहनु हुन्छ ? व्यक्तिको भन्दा देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर किन बोल्न सक्नुहुन्न ? विगतका सरकारका तुलनामा यस सरकारले देश र जनताका हितका धेरै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको छ । अढाइ वर्षको अवधिमा सरकारले भूकम्पपीडित बारा, पर्साका सुनामीपीडित तथा प्रधानमन्त्री आवास योजना अन्तर्गत जम्मा ७ लाख घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको आजसम्म नेपालमा कतै सुन्नुभएको थियो ? ज्यान जोखिममा पारेर तुइनबाट आवागन गर्न दूरदराजका विवश बालबालिका, बृद्ध र वनिताको दुःख माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालल प्रधानमन्त्री हुँदा किन देखेनन ? किनकि भात मात्र हेर्नेले भविष्य देख्दैनन । भविष्य हेर्नेहरु भातको मात्र चिन्ता गरेर बस्दैनन ।
अहिले १४२ वटा तुइनमध्ये १२५ वटा तुइन विस्थापित भएका गाउँमा जानुभयो भने सरकारको वास्तविक लोकप्रियता थाहा पाउनु हुने छ । केही सीमित सहरिया फेक र पेड न्युजका भरमा सरकारको लोकप्रियता जाँच्ने धृष्टता नगर्नु होला । जहाँ जहाँ जुनजुन क्षेत्र, गाउँ, सहर र ठाउँहरुमा सरकारले काम गरेको छ, त्यहाँ गएर मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ । तर ती ती क्षेत्रका जनताका वास्तविक आवाजहरु तपाईं हामीहरु बोल्दैनौँ । कम्तीमा आवाजविहीनको आवाज बोलिदिनुहोस । विगत लामो समयदेखि मुर्छित बनेका जनताका सपनाहरु बैरिन लागेका बखत त्यसमा पानी खन्याउने दुस्साहस नगर्नु होस । आफ्ना लागि नभए पनि भावी सन्ततिका लागि भने पनि सही र सत्य बोल्नुहोस ।
तपाईंले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभए संविधान मर्छ भन्नुभएछ तर देश मर्न लागेको देख्नुभएन । संविधान बचाउन बोल्छु भन्ने तपाईं देश बचाउन कहिले बोल्ने हो ? तपाईंको बोलीमा आग्रह पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले प्रमलाई सेलिब्रिटी भनेकामा घोर आपत्ति गर्नुभएछ । तर सेलिब्रिटी शब्दको एउटै अर्थ र आशय हुन्छ र ? एउटै शब्दको समय, सन्दर्भ र प्राविधिक रुपमा अनेक अर्थ हुन्छन । तर यसलाई सिनेमा जगतमा प्रयोग गरिएको भनेर हेलाहोचो गर्न मिल्छ ? श्रोता, पाठक र सभामा सहभागीको स्तर हेरेर तदनुसार बोधगम्य भाषा र शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ । तपाईंले सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेललाई पनि संसद् विघटनबारे थाहा नभएको ज्योतिषवाणी बोल्नुभएछ । तर आसन्न दुर्घटना देखेर आपत्कालीन द्वार खोलेर घरपरिवारको बचाव गर्न छाडेर हात बाँधेर घरसल्लाह गरेर बस्नु बुद्धिमानी हुन्छ ? तपाईंले संविधानमाथि प्रहार गरेको देख्नुभयो तर विगतदेखि देशमाथि गर्न खोजेको नजिर देख्नु भएन ?
विखण्डनकारीहरुको दुर्नियत थाहा भएपछि प्राप्त उपलब्धि जोगाउन र देशलाई चरम अस्थिरताबाट जोगाउन संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ । बल्लबल्ल बनेको स्थायी सरकार र स्थिर राजनीतिलाई अस्तव्यस्त पारेपछि अर्को सरकार दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर मात्र बन्नसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विगतमा भए जस्तै सांसद् खरिदबिक्रीसम्मको अत्यन्त अराजनीतिक भद्रगोल उन्पन्न हुने अवस्था टड्कारो देखिन्छ । तर उपर्युक्त घटना र परिघटना पछाडि नेपालको आन्तरिक कारण प्रबल देखिए पनि बाह्यशक्तिको राप, ताप महत्वपूर्ण कारण रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपालको दरवार, घरबार र प्रमुख पार्टीभित्रका आन्तरिक अन्तर्विरोधमा खेलेर त्यहाँ भ्वाङ प्वाल पारेर ध्वंश गर्ने र देशमा नै गम्भीर संकट ल्याउने दुर्नियत पहिलेदेखि अहिलेसम्म जारी छ । यस अवस्थामा यस्ता संवेदनशील गतिविधिहरुका बारेमा बौद्धिक समुदाय विशेष रुपमा सचेत र सावधान हुनु अपरिहार्य देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार थिएन र छैन भने संविधानको भाग ७ धारा ७४ को शासकीय स्वरुप अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने पदावली किन राखियो ? यसले विशेष परिस्थितिमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुन्छ भन्ने आम मान्यता स्पष्ट हुँदैन र ? संविधानको धारा ८५ को १ मा अगावै विघटन भएबाहेक ५ वर्ष प्रतिनिधिसभाको अवधि हुनेछ भनिएको छ । अगावै शब्द उल्लेख गर्दा कुनै प्रतिबन्धात्मक धारा, दफा, उपदफा र स्पष्टीकरण किन दिइएन ? बताउन सक्नु हुन्छ ?
यसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित हुने देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन २०७३ ले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा संसद् विघटन भएमा त्यसपछि पाउने पारिश्रमिक नपाउने तर थप एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम रकम दिइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यति तथ्य हुँदाहुदै भ्रम छर्दै किन कुदनु हुन्छ ? कतै बिदेसी डलरकै प्रभाव त होइन वकिल साहेव ?